Home / Interior design / Scema miloko fotsy sy fotsy madio, miverina amin'ny fahatsorana sy fahadiovan'ny trano | First Space Design Chengdu
2021 / 05 / 26 FisokajianaInterior design 8491 0
FDC: Alliance Alliance Interior Design
Tompony: “Tsy dia nanantena firy tamin'ity trano ity aho, angamba trano fisotroan-dronono ihany io. Fa ny volavolanao dia mahatonga ahy hahatsapa fa manantena an'izany aho. Mahatonga ahy hahatsapa fa ny fiainako amin'ny ho avy dia afaka mihaino ny orana amin'ny alina eny am-baravarankely, ary misy sary vorona sy voninkazo. ” Io angamba no dikan'ny famolavolana. Tsy afaka ny tsy hieritreritra andalana iray avy amin'ny “Wandering Earth”: “Ny fanantenana dia zavatra sarobidy kokoa noho ny diamondra amin'izao vanim-potoana izao”.
① Ity tranga ity dia any amin'ny Distrikan'i Wuhou, Chengdu City, no fotoana voalohany nifandraisantsika tamin'ny lehilahy tompon-trano, lehilahy feno finiavana amin'ny hafanana. Ny tompon-trano maharitra amin'izao fotoana izao dia irery, ny zanany vavy sy ny vadiny dia tsy ao an-tanàna ary indraindray mody mandritra ny fotoana fohy. Na dia tsy eo akaiky aza ny fianakaviany amin'izao fotoana izao dia mbola tapa-kevitra ihany ny tompony fa handoko ny trano. Tiany hanana trano mafana sy milamina ny fianakaviany izay miandry azy ireo rehefa mody izy ireo. Rehefa avy nametraka famolavolana iray ny tompon-trano vehivavy dia nanambara fa ny tompon-trano lahy no tompon'ny teny farany tamin'ny fanavaozana. Noho io fanapahan-kevitra io izahay dia nahatsapa ny lafiny mafana sy mirindra amin'ity fianakaviana ity, izay nahatonga ny asan'ny endrika taty aoriana handroso kokoa ihany koa.
② Taorian'ny nahazoanay ny kaomisiona momba an'ity raharaha ity dia nandamina indray ny fisian'ny habaka am-boalohany izahay ary nandamina ny efitrano fatoriany sy ny efitrano misy ny zanakavavikely (fandinihana ataon'ny zanaka vavy). Ny volavola dia mampiasa loko fotsy sy fotsy madio be dia be mba hamoronana toeram-ponenana hazo mampiadana sy mampiadana.
Ny ilany havia amin'ny fidirana dia ny faritra miova kiraro, fitaratra hatramin'ny faran'ny toerana amin'ny alàlan'ny fahatsapana habaka, mba hahatsapana ho mahazo aina sy mamiratra kokoa ny habaka. Mba hampitomboana ny fifandraisan'ny habaka, ny lakozia dia mampiasa ny varavaran'ny fitaratra mihetsiketsika an'i Changhong. Io dia ahafahana mifampiresaka sy mifampiresaka eo amin'ny sehatra roa samy hafa.
Ny efitrano fisakafoanana dia namboarina tamin'ny akora voajanahary, amin'ny fampiasana loko marefo indrindra sy ny endriny tena misy mba hanehoana ny fiainana tsotra indrindra. Ny chandelier chicelier chicelier dia mamorona tontolo fisakafoanana mahafinaritra sy kanto.
Ny efitrano fisakafoanana dia namboarina teo amin'ny sisin'ny efitrano fandraisam-bahiny, ka nahatonga ny efitrano fisakafoanana ho an'ny vahiny. Ny faritra fisakafoanana dia maharendrika sy madio toy ny toetran'ny tompon-trano ihany. Ny sakafo dia tsotra toy ny fiainana, noho ny originality sy ny faka.
Ny efitrano fandraisam-bahiny dia tsy misy haingon-trano sarotra na endrika mahafinaritra, fa manolotra hatsarana miavaka izay mamerina ny fiainana ho amin'ny fahatsorany tany am-boalohany. Ny toerana madio dia mahatonga ny olona ho tony sy hiala sasatra ao anatiny, manala ny tsy faharetana ary miverina amin'ny votoatin'ny fiainana.
Ny fahitana misokatra sy ny tara-masoandro be dia be, ary koa ny fijerena zaridaina ivelany tsy misy sakana. Tsy manamafy ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ny habaka anatiny sy ivelany ihany, fa mahatonga ny toerana an-trano ho toa mamelombelona sy voajanahary kokoa.
Fianarana sy efitrano fandriana
Ny volana feno sy ny boky tsara dia ampy handanianao fotoana fialamboly mahafinaritra.
Ny varavarankely ao amin'ny seza dia noforoninay rehefa avy nanosika ny rindrina. Jiro tsara ny zaridaina ety ivelany, ary miaraka amin'ny fiovan'ny hazavana, ny faritra rehetra ao amin'ny efitrano dia voan'ny hafanan'ny tara-masoandro.
Ny latabatra dia tafasaraka amin'ny farafara fandrian'ny efitrano fatoriany, ary ny zavona toa mangarahara manampy ny hakanton'ilay toerana.
Ny famolavolana ny efitrano fandriana dia mifikitra amin'ny feo miray tsy misy fantsom-panaingoana be loatra. Farafara lehibe, rindrina hazo, ary ny fampitambarana hazavana sy aloka amin'ny nofinofy mikorontana, no handravaka ny atmosfera milamina izay tena manintona.
Efitranon'ny zanaka vavy
Ny trano dia tsy toerana honenana fotsiny, fa seranan-tsambo koa ho an'ny fanahy. Mianatra any Beijing ny zanakavavin'ny mpanjifa ary ny efitran'ilay zanaka vavy no zava-dehibe indrindra amin'ny mpanjifa mandritra ny fifandraisana an-trano. Na dia nanidina lavitra hatrany aza ilay zanaka vavy noho ny fianarany sy ny asany dia nahatsapa ny fitiavana lehibe ho azy izahay amin'ny maha ray aman-dreny azy nandritra ny fizotry ny serasera, izay nahatonga anay koa hijery manokana ny famolavolana ny programa. Iray amin'ny fahasambarana amin'ny maha-mpamorona azy ny mampita fitiavana amin'ny alàlan'ny tanan'ny famolavolana.
Ireo kabinetra vita am-pahibemaso dia mitazona rindrina telo mba hahatratrarana ny vokatra fitehirizana faran'izay betsaka sy hanomezana izay ilain'ny tompon-trano fitehirizana. Ny fitambaran'ny volondavenona fotsy sy fotsy dia feno firafitra ary mety amin'ny tompon-trano karakarainy.
Ny faritra fandroana faharoa miaraka amin'ny taila vita amin'ny hazo faux amin'ny faritry ny besinimaro dia madio sy feno fahatoniana sy fiononana. Ny fizarazaran-kazo fotsy, miampy ny endriny tsotra an'ny sink. Ny fifandimbiasan'ny hazavana sy ny aloka dia mahatonga ny habaka hihazakazaka kokoa.
Lemaka fitaratra, jiro miafina miaraka amin'ny endriny tsara amin'ny taila amin'ny rindrina, mifangaro mba hamoronana tsiro fandokoana amin'ny ranomainty.
Mitondrà namana iray na roa hifosa amin'ny zaridaina ary hankafy ny hatsarana sy ny fiainana feno.
Ny latabatra sy seza wicker manodidina ny zaridaina, maka fialam-boly ao afovoan-tanàna, dia milay sy mahafa-po.
▲ Drafitra fananganana tany am-boalohany
Tetikasa / anarana
Anaran'ny tetikasa / Dinika fifankatiavana
Tetikasa / Faritra
Tetikasan'ny tetikasa / 158㎡
Tetikasa / Fotoana fametrahana
Tetikasa / 2020.12
Famolavolana / Chengdu First Space Design
Famolavolana / FDC STUDIO
Talen'ny famolavolana / famoronana
Tale mpamorona / Zhang Yue
Mpanatanteraka Design / Design
Talen'ny famolavolana / Li Hailong Luo Xin
Lahatsoratra / Fanoritana
Fanovana / SAC
Photography / mpaka sary
Photography / Izay Puyu
Avy amin'ny dikan'ny hoe "ny fo voalohany dia toy ny iray
Toerana voalohany | manizingizina hatrany ny famolavolana endrika amam-panahy, ary miezaka handinika lalina ny fifandraisana ara-pihetseham-po eo amin'ny olona sy ny olona, ​​ny olona sy ny habaka, manasongadina ny fiasa sy ny fomba malemy.
Toerana voalohany | Hita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=fifampikorohanay&oldid=XNUMX ''
Tale: Zhang Yue
First Space dia famolavolana endrika "mifototra amin'ny olona", mino i First Space fa tsy ny fomban'ny famolavolana ny endrika endrika fa ny ain'ny olona miaina ao anatiny, ny fanitarana ny tontolon'ny fanahy. First Space dia mino fa ny endrika famolavolana dia tsy ny faka amin'ny fisian'ny famolavolana, fa ny ain'ny olona miaina ao aminy sy ny fanitarana ny tontolo ara-panahy no votoatin'ny famolavolana habakabaka. Mandritra izany fotoana izany dia mino koa i First Space fa ny endrika dia tokony ho fanehoana fihetsem-po, ary zava-dehibe ny mihetsika sy manazava ny fon'ny olona. Noho izany, First Space dia mino foana ny fampiasana ny volavolanay hanafana izao tontolo izao sy hampielezana ny herin'ny famolavolana manohina ny fon'ny olona. Mandritra izany fotoana izany, ho an'ny filan'ny mpanjifa samy hafa sy ny habaka, ny azontsika atao dia ny mitsabo tsara ny toerana tsirairay, mba hitondrana tena tsara, hajaina, mahaolona ary mahazo aina tsara ireo olona mampiasa io toerana io. Hanaja ny fahazaran'ny mpampiasa tsirairay ny habaka ary hanana fiainana tsaratsara kokoa. Ny fahafaha manokatra varavarana manana fiainana avo lenta kokoa ary mahita fomba fiaina tsara kokoa noho ny ankehitriny miaraka amin'ireo mpanjifanay.
Previous :: Skandinavianina mifangaro amin'ny fomban'ny Sinoa, Suède 87m2 Mizara Trano Fankalazana! Next: Mahita ny The Mountain Tea Lodge, Toerana Zen misy rano, vato ary hazo maniry voajanahary | Drafitra ONE-CU
2021 / 08 / 15 5750
2021 / 08 / 15 6319
2021 / 08 / 15 6105
2021 / 08 / 14 6375